Qaraxyo iyo is-rasaaseyn saaka ka dhacday huteelka Dayax ee ku yaalla magaalada Muqdisho, ayaa lagu soo warramayaa in ayku dhinteen ku dhawaad 20 qof - Magudhe news
Qaraxyo iyo is-rasaaseyn saaka ka dhacday huteelka Dayax ee ku yaalla magaalada Muqdisho, ayaa lagu soo warramayaa in ayku dhinteen ku dhawaad 20 qof
Qaraxyo iyo is-rasaaseyn saaka ka dhacday huteelka Dayax ee ku yaalla magaalada Muqdisho, ayaa lagu soo warramayaa in ayku dhinteen ku dhawaad 20 qof.
Abaare sagaalkii aroornimo oo daqiiqado la ‘a ayaa gaari weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu qarxiyay dibadda hotelka Dayax oo ku yaala waddada Maka Al-mukarama, dabadeedna rag hubeysan ayaa ka dagay gaari kale daqiiqado kadib markii uu qaraxu dhacay iyagoo u gudbay barxadda hotelka halkaas oo uu ka bilowday dagaal culus oo u dheexeeyay raga weerarka soo qaaday iyo illaaladdii hotelka.
In cabaara markii ay rasaastu socotay ayaa gaari kale oo loo malaynayo inuu ahaa kii ay ka dageen raggii weerarka hotelka ku qaaday uu qarxay, waxana halkaasi ka dhashay khasaare kale oo dhimasho iyo dhaawcba leh, waxana kamid ahaa dadka ku dhaawacmay qaraxa labaad ilaa todobo weriye oo u kala shaqeeya warbaahinada caalamiga ah iyo kuwa maxaliga.
Hotel ka la weeraray waxa daganaa qaar kamid ah xildhibaanada cusub ee baarlamanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin.
Previous PostBaarlamaanka Turkiga ayaa si hordhac ah u meelmariyay dastuur cusub oo awoodo dheeraad ah siin doona madaxwayne Recep Tayyip Erdogan.Next Post70 jir ka soo jeeda gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa Talaadadii qirtay in uu dhac u gaystey Bangi isagoo taas uga gol lahaa inuu uga baxsado xaaskiisa.